Amafutha e-Synthomycin avela ku-acne, ukubuyekezwa kwawo okuqinisekisa ukusebenza kwawo, kuyisisombululo esihle kakhulu sokungapheleli kwezikhumba ezihlukahlukene. Lesi sidakamizwa singatholakala kunoma iyiphi ikhemisi. Ngaphezu kwalokho, intengo ephansi ihlukanisa la mafutha asuka kwizimali eziningi ezikhangisiwe.
Ingxenye eyinhloko, enomphumela wokwelapha, i-levomycetin. Ibulala amagciwane. I-Novocaine, engxenyeni yemithi, inikeza umphumela we-analgesic. Phakathi kwama-excipients yi-sorbic acid, i-castor oyela, i-ethylcellulose, i-emulsifier namanzi ahlanzekile.
I-Synthomycin amafutha we-acne (ukubuyekezwa kwabathengi abaningi baqinisekisa inzuzo yayo) yi -antibiotic ebanzi. I-Levomycetin iyangena kalula embranini yeseli ye-bacterium ye-pathogenic futhi ivimbele ukukhiqizwa kwayo. Isidakamizwa sibulala staphylococci, streptococci, meningococci, gonococci. I-Synthomycin amafutha we-acne (ukubuyekezwa okuqinisekisa lokhu) cishe akulona umlutha, okunye okungekho okungazelelwe. Lokhu kwenza kube lula ukusebenzisa lesi sidakamizwa isikhathi eside ngokwanele njengoba kwenzeka ukuqhuma. Ngaphandle kokwelashwa kwe-acne, amafutha asetshenziswa kahle ngokumelene namagundane ahlanzekile, izilonda, izilonda, amathumba, ama-carbuncle, ngokushisa nezifo ze-membrane emangcwabeni.
I- sintomycin i-ointment isetshenziselwa kanjani induna
Ukubuyekezwa kuthiwa kusetshenziswe ngempumelelo ngabantu abaneminyaka ehlukene ngokuhlukumezeka kwesifo. Lapho ukwelapha izigaxa, kusetshenziswa amafutha angama-10%. It isetshenziswa ungqimba encane ezindaweni ezikhuthele izikhathi ezimbili noma kathathu ngosuku. Uma kunezinhlanzi ezimbalwa, kungenzeka ukuthi usebenzise i-ointment point point. Uma kwenzeka izilonda zesikhumba zinzima ngokwanele, amafutha agcobe esetshenziselwa isiqephu se-gauze bese esetshenziselwa kubo, umthamo uyasetshenziswa phezulu. Isikhathi sokwelapha singamasonto amabili kuya kwamabili.
Amafutha e-salicylic for acne
Ukubuyekezwa kwalabo ababhekene nezifo zesikhumba, bakhombise ukuthi amafutha e-salicylic asebenza kahle ngokumelene nezifo eziningi. Into esebenzayo kuleli cala i- salicylic acid. Ngesizo salo, ungasusa ama-acne nama-acne ngesikhathi esifushane. Ingasetshenziswa kokubili ebusweni bombuso nasendaweni ethintekile. Kwanele ukukwenza lokhu ekuseni nakusihlwa, futhi kungakapheli isonto umphumela uzobonakala. Amafutha athengiswa kuma-pharmacy amaningi ngaphandle kwemithi kadokotela. Ngaphezu kwalokho, amafutha e-salicylic avame ukufakwa ukuze abhekane nama-crams.
I-Erythromycin amafutha we-acne
Ubufakazi buqinisekisa ukuthi lesi sidakamizwa senza ngokushesha kakhulu. Iqukethe i-antibiotic, engaba umlutha ngokusebenzisa isikhathi eside. Kulokhu, akufanele usebenzise isikhathi esingaphezu kwamasonto amabili. Faka amafutha ekhanda kabili ngosuku. Ukuvuvukala okukhona kuzoqala ukwehla ngokuphawulekayo ngemuva kwesicelo sokuqala. Kumele kuqashelwe ukuthi amafutha angabangela isikhumba esomile. Abantu abanesikhumba esivamile nabomile kumele basebenzise le mithi ngokuqapha okukhulu.
I-Endometriosis, ukwelashwa kwemithi